Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka: tahirin-javamananaina « Biosphère » fahadimy eto amintsika | NewsMada
Fitambaran’ny tontolo mananaina maromaro manana ny lanjany manokana hikajiana ny tontolo iainana ny « Biosphère ». Ahitana izany ny any Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka, any Toliara.
Ahitana tontolo mananaina an-tanety, morontsiraka sady miavaka ny zavaboahary Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka, any amin’ny tapany atsimo andrefan’i Madagasikara ao aminy, toy ny akorandriaka, ny Nosy madinika maromaro, ny torapasika, ny ala honko, ny ala, sns. Anisan’ny mampiavaka ny any an-toerana ny vondron’ala misy tsilo tsy hita raha tsy eto amintsika, ny zohy na lavabato miavaka manana ny lanjany amin’ny lafiny fikarohana siantifika, amin’ny zahavoary tsy hita any an-kafa, sns. Noho ireo, nosokajin’ny Unesco ho Tahirin-javamananaina (Biospère) fahadimy eto Madagasikara ity toerana ity, nanomboka ny 28 jolay 2018 teo.
Toeram-ponenana voajanaharin’ny hazandrano maro ny any Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka, toy ny trondro, ny sokatra, ny hazandrano mampinono (feso, trozona, dugong, …). Anisan’ny tena fahita any amin’ny Nosy Ve Androka ny trozona misy trafo.
Ho an’ny zavamananaina an-tanety, manodidina ny 90%-n’ny tahan’ny biby na ny zavamaniry, tsy hita raha tsy any an-toerana. Azo faritana fa tena hamantarana ny any atiala ny sokatra Radiata, ny varika Lemur catta, ny vontsira, anisan’ny efa vitsy maneran-tany, miaina anaty lavabato amoron-dranomasina.
Manatsara ny fiveloman’ny mponina
Mandrafitra ny tahirin-javamananaina any Tsimanampesotse-Nosy Ve Androka ny Parka nasionaly Tsimanampesotse, ny Parka an-dranomasina Nosy Ve-Androka tantanin’ny Madagascar National Parks (MNP), ny Faritra arovana (AP) Amoron’i Onilahy, sokajy faha-IV, tantanan’ny Vondrona olona ifotony tohanan’ny WWF. Ahitana faritrala sy fanjonoana tantanin’ny mponina any any an-toerana manodidina ity tahirin-javamananaina ity.
Manatsara ny velon-tenan’izy ireo amin’ny lafiny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Marihina fa tena mitana ny fomba fianana nentin-drazana ny mponina.
Ireo toerana efa voasokajy ho “biosphere” eto Madagasikara: i Mananara Avaratra; ny Nosy Radama, Morontsiraka Toliara; i Kirindy Mite-Belo sur Mer.